लामो समय’पछी राजु परियारको अहिले सम्मकै कडा दोहोरी (हेर्नुहोस् भिडियो)
July 4, 2020 1345
गायक राजु परियारको उक्त दोहोरी भिडियो हेर्नु भन्दा पहिले उनको थोरै चर्चा गरौं। कुनै समय नेपाली लोकदोहोरीमा राजु परिया’रको ठूलै साम्राज्य थियो । तर, नाटकीय रुपमा उनको करिअर चम्किदाचम्किदै एकाएक निभ्यो ।
लोकपि्रयताको शिखर’बाट उनलाई कसैले फेदीमा हुत्याए’को होइन, आफैं चिप्लेका हुन् । लामो अन्तराल’पछि फेरि आफू’लाई ब्यूझाँउने प्रयत्न गर्दैछन् । फेरि उका’लो उक्लिन खोज्दैछन् । के राजू फेरि त्यो शिखर चुम्न सक्लान् त ?
राजुलाई आफ्नो जिन्दगी पहिले जुन ल’यमा थियो आज पनि त्यही लयमा हिँडेकोजस्तो लाग्छ । त्यसो भए यो बीचमा उनी कहाँ बरालिएका थिए ? उनी दावी गर्छन्, ‘बीच’मा रेस्ट लिएको हो । उत्कृष्ट गीतको खोजीमा देश-विदेशमा दौडने क्रम’मा यसो हुन गएको हो ।’
लामो समयको अन्तरालमा उनले गाएको ‘दरौं सिरुबारी’ गीतले २०७२ मा सर्वोत्कृष्ट लोकगीतको अवार्ड पायो । यही गीतले उनको पुनरागमनको ढोका खोलेको छ । उनकै रचना/स्वर र जय:कुमार परियारको संगीत रहेको यो गीतलाई युट्यु’बमा हेर्ने दर्शक बढिरहेका छन् ।
यही गीतबाट उनी फूलमा भम’रा, मौरी फूलमाथि, मिर्मिरेको घाम, लमजुङ जाने दाइ जस्ता गी’तकै राजु परियार हुन् भनेर प्रमाणित गर्न कस्सिएका छन् । उनको पुनराग’मनले उनका आफन्त, शुभचिन्तक, लोक गीतप्रेमी हौंसि’एका छन् । राजु पनि पुनः स्टुडियोदेखि स्टेज’सम्म छाउने सुरसारमा छन् ।
उनको अनुपस्थि’तिमा धेरै गायक जन्मिए । केहीलाई राजु परियारको विकल्पका रुपमा हेरियो । यसबी’चमा धेरैजना ठट्टैठ’ट्टामा यो क्षेत्रमा आएको देखेका छन् उनले । ‘टेलिभिज’नमा अनुहार देखाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन,’ उनी भन्छन्, ‘वर्षको एउटा बना’उनुपर्छ तर उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ ।’
त्यसैले त झलकमान गन्धर्व, बिमाकुमारी दुरा, हरिदेवी कोइरा’लाका सदावहार गीतलाई ‘मिस’ गर्दारैछन् राजु । राजुले अहिलेसम्म कति गीत रेकर्ड गराए होला ? उनले गाए’का थुप्रै गीत आफैले बिर्सि’सकेका छन् । कतिप’यले राजुलाई मात्रै गाउन लगाएर आˆनो नाम अगाडि राख्दै एल्बम निकालेका छन् । कतिले त उनको स्वर राखेर नामै उल्ले’ख गरेका छैनन् ।
Prevअञ्जली अधिकारी र मेलिना राईको तीज गीत भयो भाइरल (भिडियोसहित)
Nextब्रेकिङ्….रोपाइँमा प्रहरी र स्थानियबासी बीच झडप…
दिनदिनै नुहाउँदा हुनसक्छ यस्तो हानी
दुई दिनमै यती धेरैले हेरे प्रकाश सपूतको गीत ‘बदला बरी लै’ (भिडियो सहित)